Batch Pyrolysis Plant၊ Pyrolysis Plant LYBH
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် - စွန့်ပစ်ရေနံအသစ်ထုတ်ယူသောမော်လီကျူးပေါင်းခံစက်သည်လေဟာနယ်အက်တမ်အက်စစ် (flash atomization flash) လျင်မြန်စွာပေါင်းခံသောနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။ မြင့်မားသောလေဟာနယ်မော်လီကျူးပေါင်းခံသည့်နည်းပညာသည် ၃၅၀ ခန့်ရှိသော်လည်း၎င်းသည်မတူညီသောမော်လီကျူးရွေ့လျားမှု၏လွတ်လပ်သောလမ်းကြောင်း၏ခြားနားချက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်: ဓါးပြားကိုအမြန်နှုန်းဖြင့်မောင်းနှင်ရန်မော်တာမှတစ်ဆင့်ပလတ်စတစ်ကြိတ်ခွဲစက်နှင့်ရွေ့လျားနေသောဓားဓားအားအမြန်လည်ပတ်မှုတွင်ဓားကွာဟမှုနှင့်ဓားကွာဟမှုနှင့်ဆက်စပ်သောရွေ့လျားမှုလမ်းကြောင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်ဖွဲ့စည်းသည် ပလတ်စတစ်၏ကြီးမားသောအပိုင်းအစများကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ညှပ်ပလပ်စတစ်ကြိတ်ခွဲခွဲစိတ်မျက်နှာပြင်ကွက် filter ကို output ကိုမှတဆင့်ပလပ်စတစ်အမှုန်အရွယ်အစားအပေါ်ပလပ်စတစ်ပြီးနောက်ကျိုးပဲ့နေကြသည်။ LYBH-PS800 အမျိုးအစားလှည့်ဓါး၏ 420mm မှတ်ချက်မှတ်ချက်။
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်: ၁။ ပူပြင်းသောလေပူဖောင်းကိုယ်ထည်နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးအမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများအကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုကိုသေချာစေပြီးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီ၏ညှိနှိုင်းမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပျက်ကွက်မှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ အမှားတစ်ခုရှိရင်တောင်အမြန်ဆုံးနှုန်းဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ၂။ ပူပြင်းသောလေမီးဖိုသည်တိုက်ရိုက်ပေါင်းစပ်ခြင်းအမျိုးအစားကိုအသုံးပြုသည်။ အပူသည်အမြင့်ဆုံးအသုံးပြုမှုနှုန်းရှိပြီးအပူချိန်မြင့်နိုင်သည်။ မြန်သောလေကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်၊ ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသည်။
Product Detail: အလိုအလျောက်မြင့်မားသောလျှပ်စစ်သံလိုက်တပ်ဆင်ထားသောပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့် burner အားလေကြောင်းထောက်ပံ့ရေးစနစ်၊ စက်နှိုးခြင်းစနစ်၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းစနစ်၊ လောင်စာဆီစနစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ထိန်းချုပ်စနစ်တို့ဖြစ်သည်။ လေကြောင်းထောက်ပံ့ရေးစနစ်လေကြောင်းထောက်ပံ့ရေးစနစ်၏လုပ်ဆောင်ချက်သည်လောင်ကျွမ်းသောအခန်းသို့လေနှင့်အတူလေကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့ ်၍ အချို့သောလေကိုပို့ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများမှာ shell, fan motor, fan impeller, air gun fire tube, damper controller, damper baffle, CAM regulat ...
Qingdao Longyuan Baihong Machinery Equipment Co, Ltd သည် Shandong ပြည်နယ်၊ Tsingtao တွင်တည်ရှိသည်။ ကုမ္ပဏီသည်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်ဒီဇိုင်းသဘောတရားများကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ အဓိကအားဖြင့် pyrolysis စက်ရုံကိုထုတ်လုပ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ISO9001 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ CE အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့် SGS အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်စက်မှုလုပ်ငန်းကွင်းဆက်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာနည်းပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း၊ နည်းပညာလေ့ကျင့်ခြင်း၊
BASF SE သည်ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ Dillingen / Saarland တွင်အခြေစိုက်သည့်စွန့်ပစ်ယာယာအထည်အလိပ်နည်းပညာနည်းပညာကိုအထူးပြုသည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သော Pyrum Innovations AG ကိုယူရို ၁၆ သန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ ဤရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် BASF သည် Dillingen ရှိ Pyrum's pyrolysis စက်ရုံတိုးချဲ့မှုနှင့် ...
စတော့ဟုမ်း - စကင်ဒီနေးဗီးယားပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာစနစ်များ (Enviro) နှင့် Michelin တို့သည်မူလမျှော်မှန်းထားသည်ထက်ခြောက်လအကြာတွင်တာယာပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအပြီးသတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖက်စပ်တာယာပြန်လည်အသုံးပြုရန်အတွက်အခြေခံစည်းမျဉ်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးနှစ် ဦး နှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်ရရှိထားသည်။
ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအမှိုက်သရိုက်များပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း Pyrolysis Machine
၁။ တစ်နေ့လျှင် ၂၄ နာရီဆက်တိုက်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်ထိရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ ၂. အစိတ်အပိုင်းများအားလုံး၏သက်တမ်းကိုဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းတိုးစေနိုင်သည်။ 3. အဘယ်သူမျှမအနံ့, အဘယ်သူမျှမစွန့်ပစ်, ထုတ်လွှတ်ခြင်းမရှိညစ်ညမ်းမှု 4. ညစ်ညမ်းမှု 4.High ရေနံနှုန်းထား, ရေနံနှုန်း 40% မှ 45% တိုးတက်အောင် 5. ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကိုအရည်အသွေးမြင့်ကာဗွန်အနက်ရောင်ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးအထဲတွင်အညစ်အကြေးတစ် ...
ဂလိုဘယ် Pyrolysis ရေနံစျေးကွက် (၂၀၂၀-၂၀၂၅) - ကြီးထွားမှု၊ ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ခန့်မှန်းချက်များ
စျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းများမှာအပူနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသော pyrolysis oil နှင့်လောင်စာဆီဝယ်လိုအားများလာခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, pyrolysis ရေနံသိုလှောင်ခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်စပ်သောပြproblemsနာများနှင့်ရှုံးသောအခါ conditio ...
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က SABIC အပါအ ၀ င်မူလပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်သူများမှပြုလုပ်ခဲ့သောဓာတုပစ္စည်းများပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်အာရုံစိုက်မှုကိုရရှိခဲ့သည်။ | Casimiro PT / Shutter လွန်ခဲ့သော ၁၂ လကပလပ်စတစ်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းမှသက်ဆိုင်သူများသည်၎င်းတို့ထံမှများစွာသင်ယူနိုင်သည်။
စွန့်ပစ်ပလပ်စတစ်သန့်စင်စက်ရုံ, သုတ် Pyrolysis စက်ရုံ, အမှိုက်ပုံးအားပြန်လည်အသုံးချစက်, ပလတ်စတစ်ပြန်လည်ပြုပြင်စက်, စဉ်ဆက်မပြတ် Pyrolysis စက်ရုံ, တုရုပြာ,